Ny FAA dia manery an'i Verizon sy AT&T hampiato ny fandefasana 5G feno
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ny FAA dia manery an'i Verizon sy AT&T hampiato ny fandefasana 5G feno
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny FAA dia manery an'i Verizon sy AT&T hanemotra ny fandefasana 5G feno.
Mampitandrina ny Federal Aviation Administration fa ny fanitarana amin'ny bandwidth sasany dia hanelingelina mafy ny tarika ampiasaina amin'ny fiarovana ny fiaramanidina.
Ny fampandehanana ny 5 Desambra amin'ny fatran'ny C-band dia hahemotra hatramin'ny 5 Janoary farafaharatsiny.
Verizon sy AT&T dia manantena ny hiara-hiasa amin'ny FAA mba hamahana ny ahiahiny momba ny mety ho fanelingelenana ny fitaovana fiarovana amin'ny cockpit.
Ny fitsangatsanganana an'habakabaka any Etazonia dia efa nisedra olana tato ho ato, miaraka amin'ny faniriana aorian'ny areti-mifindra amin'ny sidina miady amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny mpanamory.
Verizon ary AT & TNy fandefasana 5G feno nokasaina tamin'ny 5 Desambra, izay manolotra "hafainganam-pandeha tsara" manerana ny midadasika amin'ny onjam-peo matetika, dia nahemotra taorian'ny faa Nampitandrina fa ny fanitarana ny bandwidth sasany dia hanelingelina mafy ny tarika ampiasaina amin'ny fiarovana ny fiaramanidina ara-barotra.
Ny fandefasana feno manerana ny fatran'ny C-band dia hahemotra hatramin'ny 5 Janoary farafaharatsiny, AT&T ary Verizon nambara.
Manantena ny hiara-hiasa amin'ny orinasa ireo orinasa Federal Administration Aviation mba hamahana ny ahiahiny momba ny mety ho fanelingelenana amin'ny fitaovana fiarovana ny cockpit izay mampiasa ny tarika C ihany koa.
Raha nanome 70 lavitrisa dolara mitambatra ireo orinasa mba hahazoana fidirana amin'ny C-band tamin'ny lavanty tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny indostrian'ny fiaramanidina dia nanohitra ny fampiasana azy, ary nilaza fa "ny fanakorontanana lehibe amin'ny fampiasana ny National Airspace System dia azo antenaina" Ireo mpamatsy dia mahazo dibs amin'io bandwidth io ho an'ny 5G.
Ny orinasa dia efa manana fifandraisana 5G avo lenta amin'ny tarika avo kokoa, izay ampiasany ny teknolojia onjam-peo milimetatra, ary ny fatran'ny tarika ambany, izay miadana kokoa. Na dia tsy izy ireo ihany aza no orinasa roa mamoaka 5G, ny mpifaninana aminy T-Mobile dia efa naka ny ampahany midadasika midadasika midadasika izay tsy (mbola) miasa amin'ny C-band.
Ny indostrian'ny fiaramanidina dia toa niezaka nisarika ny sain'ny orinasan-telefaona nandritra ny fotoana ela, izay nanao fivoriana tamin'ny volana Aogositra niaraka tamin'ny Vaomieran'ny Fifandraisana Federaly mba hampitandrina ny amin'ny fifandonana eo amin'ny faritra roa. Raha tsy misy zavatra vita, dia nampitandrina izy ireo fa mety hisy ny 'fanakorontanana lehibe', hanery ny faa 'hampihenana tanteraka ny fahafaha-miasa amin'ny fiaramanidina.'
Noho ny tsy naharesy lahatra ny hafa momba ny maha-maika an'io raharaha io, ny FAA dia namoaka 'buletin vaovao manokana' tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity izay mamaritra ny mety ho fanelingelenana ny 5G amin'ny fitaovana fiarovana amin'ny fiaramanidina izay miankina amin'ny fidirana amin'ny radio altimetres. Hatramin'ity herinandro ity, ny masoivoho dia nikasa ny hamoaka didy ofisialy mametra ny fampiasana ny rafitra mandeha ho azy, anisan'izany ny iray izay manampy ny mpanamory fiaramanidina sy hipetraka amin'ny andro ratsy. Ny fandraràna dia natao mba hisorohana ny fanelingelenana avy amin'ny famantarana 5G manitsakitsaka ny bandwidth, satria ny mpandraharaha 5G dia antenaina hamoaka ny teknolojia amin'ny 5 Desambra amin'ny tsena 46.
Na dia niaiky aza fa tsy nisy olana momba ny 'fanelingelenana manimba' amin'ny 5G any amin'ny firenena hafa, dia nampitandremana ny mpanamory fa tsy maintsy 'miomana amin'ny mety hisian'ny fanelingelenana avy amin'ny mpanelanelana 5G sy ny teknolojia hafa mety hahatonga ny fitaovana fiarovana sasany tsy hiasa,' izay nanoro hevitra fa ny fanelingelenana avy amin'ny mpandefa XNUMXG sy ny teknolojia hafa. noterena hamaha ny olana 'mety hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny sidina'.
Ny vondrona varotra tsy misy tariby CTIA dia nanantitrantitra fa ny tambajotra 5G dia afaka mampiasa ny spectrum, manondro firenena 40 izay niara-niasa tamin'ny solosaina fiarovana amin'ny fiaramanidina.
Ny fitsangatsanganana an'habakabaka amerikana dia efa nisedra olana tato ho ato, miaraka amin'ny faniriana aorian'ny areti-mifindra amin'ny sidina miady amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny mpanamory. Ireo tsy fahampiana ireo dia niharatsy tamin'ny fanitarana ny fepetra momba ny vaksiny manerana ny firenena.